162 views 2020-07-09
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွက် သတင်းလွှာရယူဖို့ အချိန်ကျရောက်လို့လာပါပြီ။ ပျော်ရွှင်စရာ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးအချိန်အခါကို အားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါ တယ်။ နှစ်သစ်အခါသမယမှာ ကျားမတန်းတူရေးရာ ကွန်ရက်အနေဖြင့် ကြွယ်ဝခြင်း၊ လုံခြုံ အေးချမ်းခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ကို အများပြည်သူအပေါင်း ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြ ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။
GEN TRP တစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိ Well-Being Counseling and Psychological Services အဖွဲ့ကို တည်ထောင်ထားပြီး Freelance Service Provider တစ်ယောက်အနေနဲ့ Translation, Interpretation, Research, Counseling and MHPSS Trainings စတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေပါတယ်။
ကျွန်တော် GEN ကို သိတာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထဲကပါ။ အဲဒီတုန်းက Research and Training Coordinator အနေနဲ့ GEN Coordination Unit မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖူးပါတယ်။ GEN ဆိုတာ အဲဒီတုန်းက အဖွဲ့သေးသေးလေးပါ။ အဲဒီအချိန်က အမျိုးသားဝန်ထမ်းဆိုလို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတိယ အိမ်လို မိသားစုလို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ချို့က ဒီအမျိုးသား ဂျန်ဒါကွန်ယက်မှာ ဘာလုပ်နေတာလဲဆိုတဲ့ အကြည့်တွေလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခု ဒါမျိုးတွေ နည်းလာပြီလို့ ယူဆပါတယ်။ ဂျန်ဒါကို အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပဲ ဆိုင်တာဆိုတဲ့ တစ်ဖက်စောင်းနင်းတွေ မဟုတ်တော့ဘဲ ပိုအမြင်ကျယ်လာတာ မြင်နေရသလို ဒီထက်ပိုကောင်းလာဖို့ အလားအလာတွေ မြင်နေရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်။
ကျွန်တော် အလုပ်စဝင်တုန်းက လူတွေ GEN ကို သိပ်မသိသေးပါဘူး။ မိတ်ဆက်ရင် ရှင်းပြနေရတဲ့အဆင့်ကနေ အခု GEN လို့ ပြောလိုက်ရင် တော်တော်များများ သိနေပြီးသား ဖြစ်နေပါတယ်။ အဖွဲ့အနေနဲ့ရော လုပ်ငန်းတွေ အနေနဲ့ပါ တိုးတက်ကြီးပွားလာတာ တွေ့ရတော့ ဝန်ထမ်းဟောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော TRP တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ GEN အနေနဲ့ အောင်မြင်မှု မိုင်တိုင်တွေ ရရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ခရီးက ကျန်ပါသေးတယ်။ ဆက်လုပ်စရာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ TRP တစ်ယောက်အနေနဲ့ရော အခြား တတ်ကျွမ်းတာလေးတွေနဲ့ပါ ဆက်အားဖြည့်ပေးသွားဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ မျှော်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို လမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ အဖွဲ့ဝင်များရဲ့ အင်အားနဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါရစေ..
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုကွန်ရက်အနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ကို Covid-19 အရေးပေါ်အခြေအနေကြောင့် မတ်လ (၈) ရက်နေ့တွင် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သော်လည်း လူထုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကို သတင်းမီဒီယာများနှင့် လူမှုကွန်ရက်မှု တဆင့် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လူထုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းများကို လှုပ်ရှားမှုပုံစံအမျိုးမျိုး ဖြင့် မေလ ပထမအပတ်မှ ဧပြီလ ပထမပတ်အထိ တီဗွီအစီအစဉ်များ၊ ရေဒီယိုနှင့် ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာများကို အသုံးပြုပြီး အများပြည်သူများထံသို့ ရောက်ရှိစေခဲ့ပါသည်။ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့နှင့် သက်ဆိုင်သော IEC များအား နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို ကျင်းပနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် အများပြည်သူသို့ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ ပါသည်။ ယခုနှစ်၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားအတွက် ဆောင်ပုဒ်မှာ “ အယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက် တန်းတူညီမျှမှု” ဖြစ်ပါသည်။ "အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး များနေ့" ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှတဆင့် အများပြည်သူနှင့်ထိတွေ့မှုရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ပုဒ်ပြိုင်ပွဲ၊ ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲနှင့် အပတ်စဉ် ဉာဏ်စမ်းပဟေဋ္ဌိပြိုင်ပွဲများကိုလည်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုတော် ဆုန်သင်းပါရ်၊ အလှအပရေးရာ ဘလော့ဂ်ဂါ မဝင်းမင်းသန်း နှင့် CTUM မှ မဖြိုး စန္ဒာစိုးတို့ ပါဝင်တင်ဆက်ထားသည့် လူထုအသိပညာပေးဗွီဒီယိုများကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့ပါ သည်။ တီဗီအစီအစဉ်များအနေဖြင့် “ အမျိုးသမီးများဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရဲ့လား ” ခေါင်းစဉ်နှင့် ဒီဘိတ်အစီအစဉ်ကို DVB သတင်းဌာနမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး MRTV-4 ရဲ့ " ခေတ်သစ်ပျိုမေ " အစီ အစဉ်မှာလည်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ ကျင်းပရခြင်း၏ အကြောင်းအရာများကို လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့အပြင် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနှင့်ပတ်သက်သော သီချင်းနှင့် အသိပညာပေး သတင်းစကားများကိုလည်း Mandalay FM မှတဆင့် အများ ပြည်သူလူထုအတွက် လေလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ပါသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နာ - www.facebook.com/genmyanmar.org/
ခေတ်သစ်ပျိုမေ အစီအစဉ် - https://bit.ly/3a65F0l
DVB ဒီဘိတ်အစီအစဉ် - https://www.facebook.com/DVBTVNews/videos/507164456623113/UzpfSTkwMTIyMzY2NjU4MjQ3NjoyODcxMjc2MDQ2MjQzODg1/
Covid-19 ရောဂါပိုးသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ လူသားများအပေါ် အသက်အရွယ်၊ လူမှုရေးအဆင့် အတန်း၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၊ လူမျိုးနှင့်အသားအရောင် ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေခဲ့ပါသည်။ ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုကွန်ရက်ဟာ Covid-19 အပေါ် တုံ့ပြန်မှုတစ်ရပ်အဖြစ် LIFT ၏ ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနသို့ မြန်မာငွေ ကျပ် ၃၇,၃၄၅,၅၅၀ တန်ဖိုးရှိ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်း ၁၈ မျိုး (မျက်နှာဖုံးများ၊ လက်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာအကာ အရံများ၊ PPEs) စသည်တို့ကို လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို GEN ၏ စီမံကိန်းဧရိယာများဖြစ်သည့် ရန်ကုန်တိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များသို့ ပို့ဆောင်လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ GEN ၏ ဒေသဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးမှူးများက လည်း ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ လှူဒါန်းနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနများနှင့် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒါဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် လှူဒါန်းမှုဖြစ်ပြီး GEN မှ မှာယူထားသည့် နောက်ထပ်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများရောက်ရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဆက်လက်လှူဒါန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။ LIFT ၏ Covid-19 ကို ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန့်ရန် ရည်ရွယ်လှူဒါန်းမှုအတွက် ကျား၊ မ ရေး ရာ တန်းတူညီမျှမှုကွန်ရက်မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ယခုနှစ် ဧပြီလအစောပိုင်းတွင် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးသည် ၎င်းအိမ်ရှိ အသက်မပြည့်သေးသည့် အိမ် အကူကောင်မလေးအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့် ပက်သက်သော အသံဖိုင် နှင့် အမျိုး သမီးငယ်လေး၏ ဓာတ်ပုံသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပေါက်ကြားခဲ့ပြီး အွန်လိုင်းအသုံးပြုသူ များအကြား ကျယ်ပြန့်စွာ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ကျားမရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုမြန်မာမှ အဆိုပါ ထိတ်လန့် ဖွယ်ရာ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်နှင့်ပက်သက်ပြီး ညီမျှခြင်းမြန်မာအဖွဲ့မှ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဆရာ ဦးအောင်မျိုးမင်းနှင့် ဥပဒေရေးရာကုစားရေးအဖွဲ့မြန်မာ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ရှေ့နေ ဆရာမ ဒေါ်လှလှရီတို့ကို ၎င်းတို့ ၏ မတူကွဲပြားသော ရှုထောင့်များနှင့် အင်တာဗျူးဗီဒီယိုတစ်ခုကို တင်ဆက်ခဲ့ ပါသည်။ ဆရာ ဦးအောင်မျိုးမင်းက လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်မှ သုံးသပ်ပေးခဲ့ပြီး ဆရာမ ဒေါ်လှ လှရီမှ ၎င်း၏ တရား ရေး ဆိုင်ရာရှုထောင့်မှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်အတူ ပါဝင်သုံးသပ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆရာဦးအောင်မျိုးမင်းက မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစ၍ CEDAW စာချုပ်ကို အတည်ပြု လက် မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၎င်းစာချုပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအား အကာအကွယ်ပေး ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ညွှန်းဆိုခဲ့သည်။ ဆရာမဒါ်လှလှရီက ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဥပဒေ၊ နိုင်ငံသား များ၏ လွတ်လပ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကို ကာကွယ်သည့်ဥပဒေနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေများအား ကိုးကားခြင်း ဖြင့် အဆိုပါအမှုကို သုံးသပ်ပေးခဲ့ပါ သည်။ အချိန်ပေးပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသည့် ဆရာဦးအောင်မျိုး မင်းနှင့် ဆရာမဒေါ်လှလှရီကို ကျား၊မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုကွန်ရက်မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါ သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုကို LIFT မှ ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဦးအောင်မျိုးမင်း - https://www.facebook.com/genmyanmar/videos/529565974426551/
ဆရာမဒေါ်လှလှရီ - https://www.facebook.com/genmyanmar/videos/234403991246718/
Covid-19 Quarantine နှင့် Lockdown ကာလအတွင်း စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာ ဖိအားများကြောင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ မြင့်တက်လာကြောင်း သတင်းများက ဖော်ပြ သည်။ ဤကိစ္စရပ်နှင့်ပက်သက်၍ လူထုသတိပြုမှု မြင့်တက်လာစေရန် ကျား၊ မရေးရာ တန်းတူ ညီမျှမှုကွန်ရက်မှ နာမည်ကြီး Social Influencer မဝင်းမင်းသန်းနှင့်အတူ မက်ဆေ့ခ်ျဗီဒီယို တစ်ခု ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၏ အဓိကသတင်းစကားများနှင့် တိုင်ကြား ရန် ဖုန်းနံပါတ်များပါဝင်သော အဆိုပါမက်ဆေ့ချ်ဗီဒီယိုကို LIFT မှ ကူညီပံ့ပိုးထားခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုပါ - https://www.facebook.com/genmyanmar/videos/3196953623720936/
Covid-19 ကူးစက်ရောဂါသည် ယနေ့ခေတ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံးအတွက် အဓိကခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မတူညီတဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ Covid-19 ကပ်ရောဂါနှင့်အတူ ကျား၊မရေးရာကိစ္စရပ်များမှာလည်း အကျိုးဆက်တစ်ခုအနေဖြင့် မြင့်တက်လာနေပါသည်။ ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုကွန်ရက်သည် Covid-19 အပေါ် တုံ့ပြန်မှုအဖြစ် မတူညီတဲ့နယ်ပယ်ပေါင်းစုံက အသံများအတွက် အင်တာဗျုးအစီအစဉ်များကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မတူညီတဲ့ ကဏ္ဍနယ်ပယ်များစွာထဲမှာမှ IDP စခန်းရှိ ပြည်သူလူထု သည်လည်း Covid-19 ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုကို ခံစားနေရပါသည်။ ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုကွန်ရက်မှ ဆရာမခေါန်မိုင်အား IDP စခန်းများရှိ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲများနှင့် စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်သူများ၏ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လက်ရှိအခြေအနေများကို အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Covid-19 ကာလအတွင်း ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး၌ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ မြင့်တက်လာ ကြောင်း သတင်းများကဖော်ပြသည်။ ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုကွန်ရက်က Covid-19 ၏ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို အများပြည်သူလူထုသိရှိနားလည်စေရန် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ ဆရာမသူဇာတင်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းအစီအစဉ်ကို လည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာမသူဇာတင်က အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအဖြစ် မည်သည့်အရာ တွေကို သတ်မှတ်နိုင်တယ်၊ ပပျောက်အောင် ဘာတွေဆောင်ရွက်သင့်တယ်၊ တကယ်ကြုံတွေ့ ရသည့်အခါ ဘယ်လိုအကူအညီတွေ ရယူနိုင်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ ကျား၊မရေးရာ တန်းတူညီမျှမှုကွန်ရက်မှု အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်တို့နှင့်ပြည့်စုံသည့် အင်တာဗျူးအစီ အစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့သည့် အယောက်တိုင်းကို များစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဤအင်တာဗျူး အစီအစဉ်များကို LIFT မှ ကူညီပံ့ပိုးထားပါသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် IDP စခန်း
- Youtube - https://youtu.be/zFFmT5DMv1M
ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု
အပိုင်း ၁ - https://www.facebook.com/genmyanmar/videos/1560455177451755/
အပိုင်း ၂ - https://www.facebook.com/genmyanmar/videos/240835410594157/
အပိုင်း (၁) Youtube : https://youtu.be/eZcDv1SMuuM
အပိုင်း (၂) Youtube : https://youtu.be/OWuIqP4HMUQ
၂၀၂၀ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက် (GEN) သည် GEN ၏ ၂၀၂၀ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်၊ ရခိုင်မြေပုံအစီရင်ခံစာနှင့် COVID-19 ဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုများ အတွက် Zoom Platform မှတစ်ဆင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (DG) နှင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ GEN ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအပေါ် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန မှ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့်အတူ အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ပြသခဲ့သလို GEN ၏ ၂၀၂၀ လုပ်ငန်းအစီအစဉ် များကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်မှုများပေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (DG)နှင့် LIFT မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်များအစည်းအဝေးကို Zoom Platform မှတစ်ဆင့် ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူမှ ပံ့ပိုးသူ(Facilitator)အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး Karuna Mission Social Solidarity (KMSS), Land Core Group (LCG), Metta Development Foundation နှင့် Network Activity Group (NAG) တို့က အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤအစည်းအဝေးသည် LIFT ၏ မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်များနှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် (DG) တို့အကြား ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေး မှာအနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သည့်ဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရန် ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် Covid-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုအပေါ် တုံ့ပြန်မှုဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ပြုလုပ် ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက် (GEN-CU) ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူသည် မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂ၏ အမျိုးသမီးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သုတေသနအင်တာဗျူးအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး သူမ၏ အဓိကကျွမ်းကျင်ရာဖြစ်သည့် ဂျဲန်ဒါ၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကိစ္စရပ် ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို မျှဝေပေးခဲ့ပါသည်။
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ ဒါရိုက်တာသည် အောက်ပါအွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတစ်ခုချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးမှုများတွင် ကြွယ်ဝသော ဗဟုသုတနှင့် များစွာသော အတွေ့အကြုံများကို မျှဝေခြင်းဖြင့် ပါဝင်ကူညီခဲ့ပါသည်။
နယူးယောက်အခြေစိုက် Article Group Organization (AGO) အဖွဲ့၏ Skype Platform မှ တဆင့် ပြုလုပ်ကျင်းပသည့် " မြန်မာနိုငံ၏ ဒီဂျစ်တယ်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်အပေါ် ဂျဲန်ဒါရှုထောင့်မှ သုံးသပ်ခြင်း" အစည်းအဝေး။
International Alert အဖွဲ့မှ စီစဉ်ကျင်းပသည့် COVID-19 နှင့် GBV အသိပညာမြှင့်တင်ရေး အတွက် အနာဂတ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ Skype အစည်းအဝေး။
LIFT မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် ပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် COVID-19 ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်ရေးအတွက် Zoom Platform မှတဆင့် LIFT နှင့် မဟာဗျူဟာမိတ်ဖက်များ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေး။
ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ (UN Women) နှင့် ၎င်း၏ CSO မိတ်ဖက်များ Zoom platform မှတစ်ဆင့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် COVID-19 တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
Asia Foundation မှ စီစဉ်ကျင်းပသည့် အလှူရှင်များအပေါ် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအချက်များ၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့များ၏ အရေးတကြီး လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူ မည်သည့် ချဉ်းကပ်မှုက ၎င်းတို့အားအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည့် Skype အစည်းအဝေး။
1. ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် ဂျဲန်ဒါဆိုင်ရာအကြံပြုချက် အကျဉ်းချုပ်
ဤအကြံပြုချက်အကျဉ်းချုပ်သည် Covid-19 ကူးစက်ရောဂါ၏ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြောင်း အဓိကဖော်ပြ ထားသည်။ Covid-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကြာင့် အမျိုးသမီးများနှင့်မိန်းကလေးများသည် ဝင်ငွေမရရှိ သည့် အိမ်မှုကိစ္စများ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ရခြင်း၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု မြင့်တက်လာခြင်း၊ မိမိကိုယ် ကို ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ပြသာနာများနှင့် ဂျဲန်ဒါနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခြားအကျိုးသက်ရောက်များ အကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် ဤ အကျဉ်းချုပ်စာတမ်းကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေထားပြီး အခြားတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများအပြင် မျက်မမြင်နှင့် နားမကြား ဘာသာစကားများနှင့်ပါ ထုတ်ဝေရန် အစီအစဉ် ရှိသည်။ ဤ အကျဉ်းချုပ်စာတမ်းထုတ်ဝေမှု ကို LIFT နှင့် UNFPA တို့မှ ကူညီပံ့ပိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။
2. အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု အသိပညာပေး ပိုစတာ
Covid-19 Quarantine နှင့် Lockdown အစီအစဉ်များသည် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများကို မြင့်တက်စေပြီး အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့်ပက်သက်သည့် ပြည်သူလူထုအသိပညာပေး ပိုစတာဖြစ် သည်။ ၎င်းပိုစတာသည် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ ပညာပေးအချက်အလက်များနှင့် အရေးပေါ်အကူအညီ လိုအပ်သည့်အခါ ရယူရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားသည်။ ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်သည် ဤအသိပညာပေး ပိုစတာကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေထားပြီး အခြားတိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများအပြင် မျက်မမြင်နှင့်နားမကြား ဘာသာစကားများနှင့်ပါ ထုတ်ဝေရန် အစီအစဉ်ရှိသည်။ ဤ ပိုစတာ ထုတ်ဝေမှုကို LIFT နှင့် UNFPA တို့မှ ကူညီပံ့ပိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။
3. ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက်၏ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ
ကျား၊ မ ရေးရာ တန်းတူညီမျှရေးကွန်ရက် (GEN) ၏ ၂၀၁၉ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာသည် GEN ၏ အောင်မြင်မှုများနှင့်အတူ ၂၀၁၉ ခုနှစ် တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အဓိကလှုပ်ရှားမှု များနှင့် ဖန်တီးထုတ်ဝေခဲ့သော အရင်းအမြစ်များကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာသည် GEN ၏ ပြင်ပဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ နည်လမ်းများအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး GENနှင့် လက်ရှိ အလုပ်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နေသူများအပြင် အနာဂတ်မှာ GEN နှင့် လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်ပြန်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါင်း‌လုတ်ရယူရန်လခ့် - https://genmyanmar.org/research_and_publications